CDC nyere ntuziaka ngwa ngwa na Pfizer ma ọ bụ Moderna Booster Shots maka ndị America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » CDC nyere ntuziaka ngwa ngwa na Pfizer ma ọ bụ Moderna Booster Shots maka ndị America
Akụkọ Ahụike • Akwụkwọ akụkọ USA
A na-egosi agịga nwere ọgwụ mgbochi Pfizer COVID-19 n'akụkụ kaadị ịgba ọgwụ mgbochi, Satọde, Machị 13, 2021, n'ụbọchị mbụ nke ọrụ na saịtị ịgba ọgwụ mgbochi na Lumen Field Events Center na Seattle, nke dị n'akụkụ ubi ebe NFL football Seattle Seahawks na MLS bọọlụ Seattle Sounders na -egwu egwuregwu ha. Saịtị a, nke bụ ebe ịgba ọgwụ mgbochi obodo kachasị na obodo a, ga-arụ ọrụ naanị ụbọchị ole na ole n'izu ruo mgbe ndị isi obodo na nke ime obodo nwere ike nweta ọgwụ mgbochi karịa. (Foto AP/Ted S. Warren)
Nkwado gọọmentị nke onye na mgbe ị ga-enweta ogbugba ogbugba COVID-19 bụ nke erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) tọhapụrụ ndị America taa.
Ntuziaka CDC ọhụrụ ziri ezi maka ihe nkwado Covid na United States
Taa, onye isi CDC Rochelle P. Walensky, MD, MPH, kwadoro na CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) maka ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 n'ụfọdụ mmadụ. Ndị Ikike nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) yana nkwanye CDC maka ojiji bụ nzọụkwụ dị mkpa na -aga n'ihu ka anyị na -arụ ọrụ ịnọrọ n'ihu nje ahụ ma chekwaa ndị America.
Maka ndị mmadụ nwetara ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech ma ọ bụ Moderna COVID-19, ndị otu a tozuru maka ịgba ume na ọnwa isii ma ọ bụ karịa ka usoro izizi ha gasịrị:
65 afọ na karịa
Afọ 18+ ndị bi na ya ntọala nlekọta ogologo oge
Afọ 18+ ndị nwere ọnọdụ ahụike na-akpata
Afọ 18+ na -arụ ọrụ ma ọ bụ bi na ya ntọala dị oke egwu
Maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ iri na ise nwetara ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson COVID-15, a na-atụkwa aro ịgba ume maka ndị gbara afọ 19 ma ọ bụ karịa na ndị gbara ọgwụ mgbochi ọnwa abụọ ma ọ bụ karịa gara aga.
Enwere ndụmọdụ dị ugbu a maka ọgwụ mgbochi COVID-19 atọ dị na United States. Ndị mmadụ tozuru oke nwere ike họrọ ọgwụ mgbochi nke ha na -enweta dị ka ọgwụ na -akwalite. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike nwee mmasị maka ụdị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke ha natara na mbụ na ndị ọzọ, nwere ike chọọ inweta ihe nkwado ọzọ. Ndụmọdụ CDC ugbu a na -enye ohere maka ụdị ngwakọta a na dosing dabara maka gbaa booster.
Ọtụtụ nde mmadụ bụ ndị tozuru etozu ịnata mgbatị ahụ ga -erite uru site na nchebe ọzọ. Agbanyeghị, ihe nke taa ekwesịghị ịdọpụ uche na ọrụ dị oke mkpa nke ịhụ na ndị na-emeghị ọgwụ mgbochi ga-ebute ụzọ mbụ wee nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 mbụ. Ihe karịrị nde ndị America 65 ka agabeghị ọgwụ mgbochi, na -ahapụ onwe ha - na ụmụ ha, ezinụlọ, ndị ha hụrụ n'anya, na ndị obodo - enweghị nsogbu.
Data dị ugbu a na -egosi na atọ niile Ọgwụ COVID-19 kwadoro ma ọ bụ nye ikike na United States gaa n'ihu na-adị ukwuu irè n'ibelata ihe ize ndụ nke ọrịa siri ike, ịnabata ụlọ ọgwụ, na ọnwụ, ọbụlagodi na -agbasa ebe niile Delta dị iche. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka bụ ụzọ kacha mma iji chebe onwe gị ma belata mgbasa nke nje ma nyere aka gbochie ụdị ọhụrụ apụta.
Dr. Walensky nwere ihe ndị a:
“Ndụmọdụ ndị a bụ ihe atụ ọzọ nke nkwa anyị siri ike ichebe ọtụtụ mmadụ enwere ike na COVID-19. Ihe akaebe na-egosi na ọgwụ mgbochi COVID-19 atọ enyere ikike na United States adịghị mma-dị ka egosipụtara ihe karịrị nde ọgwụ mgbochi 400 enyerela. Na, ha niile dị oke mma n'ibelata ihe egwu nke ọrịa siri ike, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ, ọbụlagodi n'etiti ụdị Delta na -ekesa.